Ubuntu 15.04 Vermet Ecacile, yini ongayilindela? | Kusuka kuLinux
Ubuntu 15.04 Vermet Ecacile, yini ongayilindela?
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ukusatshalaliswa
Ukwethulwa kwenguqulo entsha ye-Ubuntu kuyasondela, njengoba singo-Ephreli 2015 ukuze abaningi bazi, izinombolo kuzoba: 15.04, Igama IVermet ecacile.
Izolo nje lingene esigabeni salo sokugcina sokuqandisa, okusho ukuthi kufanele licishe lilungele… ngeke lithole noma yiziphi izici ezintsha noma okunye okunjalo, lizosebenza ngezimbungulu ezinkulu noma okuthize. Ngiqonde ukuthi, isikhathi sokugcina sokuqhwaza yilokho okuthathwa izinyanga nguDebian, kepha uBuntu ukukwenza emasontweni ambalwa LOL!
Kodwa-ke, le nguqulo ye-Ubuntu iza nezinguquko eziningana ezibalulekile, ushintsho kusuka ku-init kuya ku-systemd ... i-kernel entsha ... ukuthuthuka ku-Unity, njll, sizonikeza imininingwane ngokuningiliziwe kokunye.
1 Ubunye 7
2 IKernel ne-init… ehm, bengisho ukuthi, systemd
3 Iziphetho ze-Ubuntu 15.04
Unity, okuthile okukhiqizile (futhi iyaqhubeka nokukhiqiza, yize kungaphansi kancaneImpikiswano eningi, ikakhulukazi ngenxa yokumiswa kwe-Canonical, manje kuletha ushintsho kumenyu yohlelo lokusebenza. Kuze kube manje sibone kuphela le menyu (uyazi, Ifayela, Hlela, njll) lapho siphakamisa isikhombisi segundane lapho kufanele sibe khona, kuphaneli, kahle… manje imenyu izotholakala hhayi kuphaneli yedeskithophu kanjalo, kepha ngokuningi 'endaweni yangakini,' kubha ephezulu yohlelo ngalunye.
Ubunye 7.3 buletha iDash, I-HUD, ezinye izithombe ezintsha ... njll.
Njengoba sekubonile, baxazulule ezinye izimbungulu ezenze iCompiz enabashayeli beNvidia abaphethe amaphutha. Futhi, bathi iCompiz 0.9.12 manje inokwesekwa okugcwele kokuhlanganiswa ne MATE.
IKernel e Init … Uh, bengisho ukuthi, systemd
Ngeke ngiyeke ukukhuluma ngobuhle nobubi bawo i-systemdSesivele sikhulume ngalokho (nokunye okuningi) lapha eDesdeLinux ... iphuzu ukuthi le nguqulo entsha ye-Ubuntu izosebenzisa i-systemd hhayi i-init.
Ngabe abasebenzisi abangathuthukile bazolubona lolu shintsho?… Ngingalokotha ngithi cha. Noma ngubani osebenzisa ikhompiyutha emsebenzini we-multimedia, isikole noma ihhovisi, okungukuthi, hhayi ukuphathwa kohlelo oluthuthukile ... akudingeki ukuthi alubone lolu shintsho, kepha hheyi, ake sibone ukuthi Ubuntu bulusebenzisa kanjani
Futhi, Ubuntu 15.04 izofika ne-Linux kernel version 3.19.3 Izinhlelo ezibuyekeziwe, njengokujwayelekile
Njengenjwayelo, inguqulo ngayinye ye-Ubuntu iza nesoftware ebuyekeziwe, i-LibreOffice, iFirefox, iChromium, njll. Lapho-ke uma befuna ukusebenzisa ama-PPAs kahle ... bangaba nesoftware ebuyekezwe kakhulu, yize izinga lokuzinza kohlelo lingathinteka 😉
Iziphetho ze-Ubuntu 15.04
Labo abanesifiso sokuhlola le nguqulo ye-Ubuntu bangalanda ifayela le- i-beta, ngaphandle kwe- ukwethulwa ngokusemthethweni yenguqulo yokugcina futhi ezinzile yiyona Ephreli 23th yalonyaka i-2015, ngakho ukulinda ngeke kube yisikhathi eside futhi.
Ngasohlangothini lokuzinza, Ubuntu ... sizobona ukuthi iziphatha kanjani.
Akukhona ukuthi ngihlala ngigxeka Ubuntu, kungenye ye-distros eletha abasebenzisi abaningi endaweni yethu ye-Linux ... kepha futhi ingenye yalabo abalahlekelwa abasebenzisi (uma kungenjalo kakhulu), okungukuthi , abasebenzisi abayekayo ukusebenzisa le distro ukusebenzisa enye, kungaba yiLinux Mint, Fedora, Arch noma iDebian, ingabe yenzelwa okuthile noma cha? ...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 15.04 Vermet Ecacile, yini ongayilindela?
URaul P kusho
Ngiyethemba ukuthi Ubuntu buzothuthukisa ukusetshenziswa kwamandla esikhathini esizayo, ibhethri lami lihlala imizuzu engama-30 kuphela, ngeWindows lihlala amahora amabili.
Njengoba benza uhlelo lwama-mobiles, izicelo zabo kufanele zihambisane ne-PC yedeskithophu, kufanele bathathe isibonelo kwaMicrosoft, izinhlelo zokusebenza engizisebenzisa ku-windowsphone yami, ngingazisebenzisa ngamawindows 8.1.
Phendula uRaul P
»Thatha isibonelo seMicrosoft»? Empeleni iMicrosoft iwuthathile umqondo ku-Canonical, umehluko ukuthi iMicrosoft inezindlela zokwenza kwenzeke onyakeni owodwa nezidingo zeCanonical 1 noma 3.
Kepha yebo, lokho Ubuntu okufunayo ngohlelo lwayo lweselula ukuhlangana nedeskithophu, okuzofika ne-Unity 8, ngombono we-2016 ...
IMozilla yenza okufanayo ngeFirefox OS nezimakethe zayo ezigcwele izinhlelo zokusebenza zewebhu ezihambisana neFirefox (sezivele zithuthukile kumqondo weMozilla Prism).
URaúl, kimi kwehluke kakhulu neLinux.Nginezikhathi ezengeziwe zokuzimela (kanye nezinga lokushisa eliphansi) ngeLinux kune-Windows 1, kimi ngine-driver yamahhala efakiwe. Zitholele indlela! Yindlela kuphela
Ngalesi siqondisi http://www.taringa.net/posts/linux/18073964/Optimizacion-de-energia-Dell-Inspirion-5521.html, Ngithole ibhethri lami likaDell lokuhlala cishe emahoreni angu-6 ngokuba namathebhu ayi-10 ku-firefoz nokubuka amavidiyo ku-youtube.
U-Ivan Barra kusho
Mhlawumbe into engingathanda kakhulu nge-Ubuntu (Canonical vele), ukuthi inkinga yokukhipha inguqulo entsha njalo ezinyangeni eziyisithupha iyaphela, kubonakala kimi kungumzamo weqembu lomsebenzi ongadingekile ngokuphelele kunoma iyiphi indawo yokubuka. Mhlawumbe kufanele usuke ku-LTS uye ku-LTS bese unikeza izibuyekezo zokuphepha ngokufanelekile bese ungeza izinhlelo zokusebenza njengoba kuvela izinhlobo "ezizinzile" kakhulu.
Abantu beCanonical benze okukhulu ekuqhubekeni phambili nokusondeza iLinux eduze nabantu abajwayelekile, ngoba noma nini lapho umuntu efuna ukuya ngapha, bakwenza kusuka ku-Ubuntu noma kokunye okuphuma kukho, azikho izimfoloko EZININGI zale distro.
Lokho kungaba yisifiso sami, mhlawumbe ngiyasithola isikhathi, kodwa i- "Hard-hitting Distros ™" cishe ngaso sonke isikhathi iba nezinkinga eziningi kakhulu futhi ithambekele ekukhungathekiseni umsebenzisi ongenalwazi oluningi noma osanda kuqala.
Phendula u-Iván Barra
Isinyathelo esinengqondo kungaba seCanonical ukugxila ekusatshalalisweni okuhle kakhulu ukuhlanganisa ibhizinisi labo leseva, kepha uma bekwenza lokho, bashiya abantu abaningi ngaphandle. Ngakho-ke, ukuhlala kusuka ku-LTS kuye kwi-LTS angicabangi ukuthi kuyindlela enhle ngaphandle kokuthi benze okufanayo noDebian.
Ngingumsebenzisi weLinux omusha, ngazama i-distro ethile kepha ngagcina ngikholisa Ubuntu ngobunye bayo nakho konke. Ngiqale ngeLinux ngo-Agasti wonyaka odlule futhi ngaya ngqo ku-14.04 LTS.
Futhi lapho umbuzo wami uya khona: le nguqulo entsha engu-15.04 akuyona i-LTS? Ngiyazi ukuthi i-LTS ngayinye isekelwa iminyaka engu-5, kepha ngiyazi ukuthi i-12.04 nayo iyi-LTS. Ngakho-ke lolu hlobo lwenguqulo luphuma iminyaka emingaki?
Huy, isivivinyo soBuntu esinjengoDebian, angisoze ngaphuma kulokhu 😀 Kepha ngeXfce 😀
USergo S, ekhasini le-Ubuntu yonke imininingwane. Ama-LTS aphuma njalo eminyakeni emibili futhi, kusukela ngo-2, aneminyaka engu-14.04 yokuxhaswa. I-LTS elandelayo izophuma ngonyaka ozayo
Izinhlobo eziphuma phakathi kwe-LTS "ukuhlolwa", yingakho zihlala okuncane kakhulu. Ama-LTS yiwona okufanele ngempela ukuwajabulela (lawa ma-edishini atholakala kuDebian, futhi kusukela kuzibuyekezo zokuqala, aqala ukuhambisana kakhulu nezinguqulo zokugcina zeDebian).
Ukukhishwa kwe-Rolling njenge-Arch noma i-Antergos yiyona I-Distros ku-Trouble ™. Kungakho ngenqaba ukuwasebenzisa.
Ngabe uke wazama iManjaro? I-Rolling Release kepha ngaphandle kwe- "rush", ukuvuselelwa kuthatha amasonto ambalwa ukufika kusuka ku-Arch, lapho kulungiswa khona izinkinga nokungahambelani. Zonke izinzuzo zemihlaba yomibili. (Ungabona ukuthi ngiyayithanda, akunjalo? Njengoba ngiyisebenzisile angifunanga ukwazi lutho nge-Ubuntu, futhi ngingumlandeli wobumbano)
Phendula ukuze ungene
Ngivumelana ngokuphelele nawe, iCanonical akufanele ichithe imali ngezinhlobo ezingezona ze-LTS ezingasetshenziswa muntu.
Kepha uma bekwenzile okushoyo, isoftware engeyona "eyokubaluleka" ibingaphelelwa yisikhathi kakhulu kuma-repos?
Isibonelo, njengamanje ku-Ubuntu 14.10 ngiye ukufaka umdlalo we-0ad futhi ngathola ukuthi yinguqulo engu-1 emuva. Ukube bekuyi-14.04, kungenzeka kube yi-2 noma i-3.
Iqiniso ukuthi uhlelo lwazo zonke izinyanga ze-6 lubukeka lubahle kubantu abanesidingo esengeziwe noma abafisa ukuvuselelwa kanye ne-LTS yalabo abangafuni ukudla amakhanda abo bashiye uhlelo olufakiwe bakhohlwe okunye (njengalapho ngibeka I-Linux kumkhulu wami, iLinux mint 17 (LTS) naku-2019 siyakubona
Ngaphandle kokunye ukulungisa ku-Unity engingakuthandi, i-systemd ne-kernel entsha, ake sithi beza ngokuqeda i-Debian, angazi ukuthi intuthuko / nokwenza kahle kwe-Canonical kunikeze malini ukuzinza, njll. kule nguqulo entsha.
Noma kungeyona i-LTS, iqiniso ukuthi ukukhishwa kwe-Ubuntu kwakamuva kuyisicefe, angiboni intuthuko enkulu, isoftware entsha yokuqala, uma ukuzinza kepha kuvela kusihlungi se-Debian akubonakali kuyinto enkulu ...
Ngizoqhubeka nokusebenzisa ubuntu ngesoftware yayo esesikhathini futhi kube lula ukusebenzisa i-ppa, kepha njenge-gnu / linux reference distro (uthanda noma ungathandi) iyasala. Futhi uma benza kahle ngama-smartphone, ngithemba ukuthi ideskithophu ayiphindiselwa emuva
Iqiniso. Bakhathazeke kakhulu nge-Ubuntu Phone nezinto futhi bakhohlwa ngokusatshalaliswa kwideskithophu. Kwakukhona vele ukuthi iCanonical yayigcwalise Ubuntu ngezicelo ezinhle (mhlawumbe ezabo, mhlawumbe zithuthukisiwe kusuka kwabanye), kepha ziyaqhubeka nokuthatha izinhlelo zokusebenza kusuka kwamanye amaphrojekthi futhi azenzi ushintsho oluningi. Umphumela? Iphimbo eliyisidina ngemuva kwephimbo eliyisidina.
Kodwa-ke, uma ufuna ukusebenzisa i-Updated Software + PPA (kuleli cala i-AUR), ngikweluleka ukuthi uzame i-Antergos 😉
Noma i-chakra, i-crunchbang (uma ipelwe ngaleyo ndlela). Uma ufuna "injabulo" ethe xaxa, mabenze ukufaka i-Arch ku-LVM kusuka ekufakweni kwangaphambilini kwe-XD
Okungenani ezinye izinyathelo ezingama-4-5, kepha kufanelekile ukuba ne-Arch ku-LVM entsha sha.
Mayelana neSoftware Center, ngeshwa izobe ingekho kuDebian Jessie njengoba uSqueeze no Wheezy bese besijwayele (isivele igxile ngokuphelele ku-Ubuntu ekukhishweni kwayo kwakamuva). Ngingathanda ukuthi le ngxenye ibekhona kuDebian Jessie, Kepha yini engenziwa uma Ubuntu ingazisebenzisi kahle izinto zayo ezihamba phambili (iSoftware Center, Unity) ebheke eDebian noma amanye ama-distros ukuze ihambisane ne-GNOME, KDE namanye ama-interface we-desktop yize bengizoyithanda ukube iSoftware Center ibikuDebian Jessie, futhi izinhlelo ezihlanganisiwe bezivele zitholakala kuwo wonke ama-desktops.
Mariano Rajoy kusho
Ubuntu ayisebenzisi phezulu kuze kube manje? ngicabanga ukuthi i-init ayenzi
Phendula uMariano Rajoy
Eqinisweni, ngangizwile into efana naleyo, kepha ngesinqumo sikaDebian bahlala neSysVInit kwaze kwaba nguDebian ukugwema izinkinga ezizayo, yanika amandla iSystemD. Njengoba ngikhumbula, Ubuntu waqala ukubheka i-Upstart ngokushesha nje lapho uDebian ebuka iSystemD.
Kubonakala kimi ukuthi isebenzisa phezulu, ngoba kwesinye isikhathi bengikwenza ezinye izinhlelo ezincane futhi ngibonile ukuthi bekungeyona inqubo 1 (init) eyamukela izinqubo ebeziyizintandane kepha kunalokho ibe yindawo yokuqala futhi ibheke kancane kulokho okwenziwe ubuntu ungasebenzisi i-init kepha i-upstart efana nenguqulo ethuthukisiwe.
UGeorge bool kusho
Ukusetshenziswa okuningi kwamagama afana nokuthile, amanye ne-ellipsis.
Kubukeka sengathi umuntu obhale lo mbhalo ubengazi ngokuqiniseka izinto eziningi angazilindela ku-Ubuntu 15.04.
Kufanele ususe ezinye izinto ezimbi ngokubhala nsuku zonke. Akugxeki kuphela ukugxeka, kufanele ugxeke kahle.
Phendula uGeorge Bool
Ingabe ibha yemenyu yezinhlelo zokusebenza iyehla iye phansi?
Angicabangi, ngokwesithombe okungenani. Kubonakala kimi ukuthi noma ngubani owenza lo mbhalo akazange abone ukuthi ku-Ubuntu asevele ekhona amamenyu kubha yesihloko.
Ngisebenzise Ubuntu okungenani izinhlobo ezi-2 noma ezi-3 ngenxa yenkinga yokushayela neyesikhungo sesoftware. Lapho benza i-GnomeShell ne-Unity, ngakhetha i-Gnome ngaphandle kwe-nostalgia (ngaqala i-mandriva 2010 nge-Gnome) futhi yize kungelona lamadeski amahle kakhulu, ngiyayithanda ngempela.
Lapho Ubuntu uzinze kancane ekukhululweni kwesibili (noma ukulungiswa) kwe-Unity, kwanginikeza izinkinga eziningi ngeCompiz Fusion, ngiyakhumbula ukuthi uma sengifake i-conky futhi yanginika umyalezo wombiko wesiphazamisi, kulapho-ke lapho ngivalelise khona ku-Ubuntu .
Ifingqa le ndaba ...
1) Ubunye banginikeza izinkinga zezinhlobo eziningi.
2) Ngaleso sikhathi wonke umuntu wakhononda ngeFedora ngokufika njalo emuva kwesikhathi kunalokho obekuhleliwe kanye nokusebenza okubi kwezicelo zayo, okuthi ku-Ubuntu, yize bekungcono, bekungeyona isizathu sokunconywa.
3) Ngivela emafasiteleni nginethemba lokusebenzisa okuthile okungafani nalokhu lapho ngokungazelelwe kuvela isikhangiso sokuphahlazeka kwasendle.
I-4) Njengokungenangqondo njengokuzwakala kwayo, ngiyakuzonda okunsomi.
5) Ku-pc kadadewethu umphathi wephakeji waba nenkinga yokuthi ngemuva kokuphenya izinsuku ezimbalwa angitholakalanga isisombululo ngenxa yokushoda kwesikhathi, nginqume ukufaka kabusha. Futhi abangane abaningana abasondela ohlangothini olumnyama babe nenkinga efanayo.
Kunezinye eziningi. Ngingasho futhi ukuthi konke lokhu okungenhla bekuyizaba nje nokuthi bengifuna nje ukuzama i-distro ezongivumela ukuthi ngifunde kabanzi ngohlelo. Ngithole i-Arch.
Lokhu bekungeke kube ukukhishwa okuqhubekayo? noma bekuyizithelo nje lawo mahemuhemu
Bengizibuza ukuthi ngilifaka kanjani i-Open office, ngoba ngisebenzisa i-OpenLP futhi kubonakala sengathi bayasebenzisana kuphela.
Yini ongayilindela?… LOKHO ONGAKULINDELA ?????
Umbuzo uyamangaza, ngithi, kusuka ku-Ubuntu awukwazi ukuba nethemba kepha okungcono kakhulu !!!!
Ngemuva kwakho konke, Ubuntu ukuphela kwe-distro enekusasa kwiLinux, okusele, uma kungahambeli efwini noma kumadivayisi eselula, kuzoba, ngomqondo ongokomfanekiso.
Edeskini laphaya. Yize ngingadingi i-akhawunti ye-Ubuntu One iqiniso, kepha amadivayisi weselula angaba yiqiniso.
I-distro kuphela enekusasa lokuhweba ofuna ukuyisho, kepha kulokhu kufanele ulinde iminyaka eminingi.
I-GNU / Linux umphakathi omkhulu. I-Debian enezinhlobonhlobo zayo eziningi kakhulu zokwakhiwa kwezakhiwo ezisekelwayo kanye nawo wonke ama-distros asesitayeleni esifanayo ne-Gentoo asenalo ikusasa elibanzi, ukusuka lapho kuzoba nabantu abazobeka "amagatsha" kulawo ma-distros kwamanye amapulatifomu abanikeze ukuthintwa kwabo. Ukuthi Ubuntu ungena ngenkani kwezinye izinkambu akusho ukuthi bekungeyokuqala noma ukuthi yiyona kuphela ekwenzile lokho.
Ukusizakala ngeqiniso lokuthi sengivele ngavula lawa mazwana (nangobuvila bokwenza elinye).
Laba bathandi bobuntu be-Ubuntu bangikhumbuza abasebenzisi abaningi be-DW, labo asebezinzile isikhathi eside, bakhululekile, bayabanda, banesizungu. Baziqhelelanisa nezinye. Abasebenzisi abasha, ngakolunye uhlangothi, abahlaliseki futhi banamandla okwenza izinto abazisolayo ngazo kamuva. Ngalokhu angisho ukuthi ubuningi obumaphakathi budedengu ngokwemvelo, kepha kunalokho ukuthi bakhuluma ngokuziqhenya ngokweqile ngefulegi abaliphethe, lapho kukhona (sengizibeka engcupheni yokukusho) izinto abangase bazithande kakhulu, , kuvuselelwa ngokwengeziwe, kunobuhle obuningi, kunobungane kakhulu. Futhi lokhu akusuki endaweni eyodwa yokubuka, kungangcono kusuka kuma-engeli amaningana. Okwamanje ngigcina i-Arch yami futhi ngizobuyela kokunye lapho sengifunde imibhalo eminingi nge-Gentoo.
Angiqondi ukuthi kungani udinwe kangaka ku-Ubuntu, ngakho-ke kungani ubhala ngakho?
I-athikili ebhalwe ngokunganaki okunjalo ayibonisi lutho ngaphandle kokushoda kobuchwepheshe kanye nokungahloniphi abafundi. Asambe! Angifuni ukugcina ngishiya le bhulogi.
Angikaze ngiyifunde ngaleyo ndlela. Eqinisweni, ushintsho olwenziwe kule nguqulo lufanele ngokwanele ukudonsa ukunakwa kwabasebenzisi be-GNU / Linux (ikakhulukazi labo ababenethemba lokusebenzisa ize i-Ubuntu "njengesiphephelo sokugcina" ukulwa neSystemD).
Ngokuphathelene nebha yemenyu ehlanganiswe nebha yesihloko, kubonakala njengomqondo omuhle kimi.
Okwamanje, ngizokhuthazeka ukusebenzisa i-Ubuntu version 14.04 (nginokwanele ngokubekezelela i-systemd ku-Debian Jessie).
UVictor R. kusho
Ukulinda okungcono bese ulanda i-Debian 8 lapho iphuma ezinsukwini ezimbalwa.
Ngicabanga ukuthi uBuntu usazohamba ibanga elide maqondana nalokhu kufakwa okusha (systemD, njll), kuzofanele silinde ukubona ukuthi kuhle kangakanani lokho kuqaliswa.
Phendula uVictor R.
Ngingomunye walabo abaqala nge-Ubuntu futhi ngokushesha bayilahla baya kwamanye ama-distros.Ngiyi-newbie futhi inkinga yami nge-14.04 kwaba ukuthi angikwazi ukudala ukufinyelela kudeskithophu.
Ngokwami ​​bengilindele ukuhanjiswa kwe-systemd ku-ubuntu kanye ne-debian yokulungiswa kwamaqhinga nezifundo kuwo wonke ama-distros, kunamabhulogi amaningi okusiza abasebenzisi balokhu, futhi namawiki kuzofanele abuyekezwe. Ngalesi sibuyekezo kukhona nezinsizakalo ezintsha ezifana (ngokwesibonelo) i-bluez 5 suite. Kuningi okufanele kugujwe, empeleni.
igacio salgueiro kusho
Ngemuva kokuhlaziya kokubili Ubuntu 15.04 no-version 14.04 kukhompyutha eyodwa, kunoshintsho oluphawulekayo maqondana nokusetshenziswa kwezinsizakusebenza, i-Ubuntu 15 ayisheleli kangako kune-14, mhlawumbe kuyindaba yabashayeli bezithombe, noma indaba yokuthi Ubuntu 15 bukhulu kangakanani ilayishiwe. Sebenzisa inguqulo engu-32-bit ezimweni zombili ...
Phendula i-igacio salgueiro
UMartin Elias Lopez R kusho
Ngubani Ongisebenzisanayo !! Ngezicelo Q ZingamaHomonyms EWindows Ne Ubuntu !!
Phendula uMartin Elias Lopez R
Kuyinto **** yami *** yenza yonke i-PC yami yehluleke umsindo. Bekufanele ngisule yonke idiski nge-Ubuntu 12.04.
Ndoda, yeka ukubhoka ngale nto ye-LTS. Ngithuthukisele kubuntu 14.10 futhi ngaphelelwa ukuxhaswa kokuvuselelwa. Ingicela ukuthi ngivuselele ku-15.10 futhi kuthiwa izonikeza ukuxhaswa izinyanga eziyi-9. Anginayo i-inthanethi eshesha kakhulu futhi manje ngemuva kwezinyanga eziyi-9 kuzofanele ngibuyekeze futhi. Kungcono ngicabange ngokuwehlisela ku-14.04.2 LTS! noma okungcono, shintshela kokunye ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux!
I-Linux Semplice: Ukushintshwa kweCrunchbang?
NgeTheminali: Usayizi kanye Nemiyalo Yesikhala